हुवावेका वाई नाइन र वाई सेभेन प्रो २०१८ सार्वजनिक | गृहपृष्ठ
Home बजार हुवावेका वाई नाइन र वाई सेभेन प्रो २०१८ सार्वजनिक
बजार2views
हुवावेका वाई नाइन र वाई सेभेन प्रो २०१८ सार्वजनिक
४.३१ अङ्कले घट्यो नेप्से, लगानीकर्ता बजेटको पर्खाईमा -
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सारांशः कति वर्षमा कुन लक्ष्य पूरा गरिने ? -
प्रिण्टर मिटर जडान नगरेका ट्याक्सीलाई कारबाही शुरू -
काठमाडौं । हुवावेले आइतवार आफ्नो वाई सिरिजका नयाँ मोबाइल नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । होटल हिमालयमा आयोजित कार्यक्रममा हुवावेका प्रतिनिधि र नेपालको राष्ट्रिय वितरक कल मोबिलिटीद्वारा नयाँ मोबाइल हुवावे ‘वाई नाइन २०१८’ र ‘वाई सेभेन प्रो १०१८’ सार्वजनिक गरिएको हो । वाई नाइनमा इण्टेलिजेण्ट फोर क्यामरा र फूलभ्यू डिस्प्ले छ भने वाई सेभेन प्रोमा इण्टेलिजेण्ट डुअल क्यामरा र फूलभ्यू डिस्प्ले रहेको छ ।
हुवावेका कण्ट्री निर्देशक जोयस् झुका अनुसार, नोभा टुआईले नेपाली बजारमा पाएको सफलतापछि हुवावे वाई नाइन २०१८ ले पनि राम्रो बजार लिने अपेक्षा राखेको बताए । वाई नाइनमा इण्टेलिजेण्ट फोर क्यामरा, फोनमा स्प्लिट स्क्रिन, ४ क्यामरा सेटअप (डुअल फ्रण्ट र ब्याक क्यामरा), बोके इफेक्ट फिचर र सुरक्षित स्मार्ट फेस रेकग्नाइजेशन छ । यो थ्री जीबी ¥याम र ३२ जीबी रोमको साथ इमुई ८ दशमलव ० अपरेटिङ सिष्टमद्वारा सञ्चालित हुन्छ ।
वाई नाइनमा १३ एमपी र २ एमपीको रिअर क्यामरा र उत्कृष्ट फोटोग्राफीका लागि दुवै लेन्समा एफ/२.० को एपेचर छ । ग्राहकको रुचि र आवश्यकताअनुरूप वाई नाइनमा १६ एमपी र दुई एमपीका दुईओटा फ्रण्ट क्यामरा र कम उज्यालोमा पनि सेल्फी टोनिङ फ्ल्यासका लागि दुवै लेन्समा एफ/२.२ को एपेचर छ । वाई नाइनमा ठूलो स्क्रिन, ४ हजार एमएएचको ब्याट्री, ट्रिपल स्लट डुअल सिमको विशेषताका साथ यसमा मेमोरी कार्डका लागि पनि छुट्टै स्लट छ । मेटल बडी भएको यो आकर्षक फोनको बजार मूल्य २५ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
हुवावे वाई सेभेन प्रो २०१८ डुअल क्यामरा एक्सपर्ट फोन हो । हुवावेले यो मोडल नेपाली युवा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेर सार्वजनिक गरेको हो । यसमा ज्यादै आकर्षक डिजाइनको इण्टेलिजेण्ट डुअल रियर क्यामरा सेटअप र टोनिङ फ्ल्यास छ । यो फोनबाट युवा प्रयोगकर्ताले प्रोफेशनल फोटोग्राफीको अनुभूति लिन सक्छन् । हुवावे वाई सेभेनमा १३ एमपी र २ एमपीको डुअल रिअर क्यामराको साथ ८ एमपीको फ्रण्ट क्यामराका साथ आधुनिक सेल्फी टोनिङ फ्ल्यास छ । यसका साथै यसमा ५ दशमलव ९९ इञ्चको एचडीप्लस हुवावे फूलभ्यू डिस्प्ले छ । वाई सेभेन प्रोको बजार मूल्य २० हजार ९ सय निर्धारण गरिएको छ ।
अमलटारी होम स्टेमा पर्यटकको चाप
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०७:०४
प्रोपर्टी एक्स्पो–२०१८ असार १ देखि
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:५७
नीति तथा कार्यक्रमबारे को के भन्छन् ?
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:४९
सानिमा लाइफ र एनआरएनएबीच सहकार्य
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:४४